Sunta Nukliyeerka Japan oo soo gaartay Sweden | Somaliska
Sunta ka dhalatay dhulgariirkii iyo qaraxyadii ka dhacay warshadaha nukliyeerka ee dalka Japan ayaa soo gaartay Sweden ayadoo magaalooyinka Stockholm, Kiruna iyo Umeå laga cabiray suntaas. Balse waxaa muhiim in la ogaado in cabirka suntaan aysan waxba u dhimi karin dadka iyo cimilada maadaama ay aad u yartahay. "Sidaan filaynay, waxaan cabirnay sunta ka dhalatay qaraxyadii warshadaha nukliyeerka Japan. Balse cabirka waa mid yar oo aan wax khatar ah ku ahayn dadka" ayuu yiri Leif Moberg oo ka tirsan Laanta Amniga Sunta Nukliyeerka (Strålsäkerhetsmyndigheten). Cabirka sunta ugu badan ayaa laga dareemay Stockholm ayadoo cabirka uu gaarayo 0.3 ayadoo Laanta Amniga Nukliyeerka ay sheegtay in aysan wax saameyn ah ku yeelan karin nolosha. Laanta Amniga Sunta Nukliyeerka (Strålsäkerhetsmyndigheten) ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto cabirka bulshadana la socodsiin doonto haddii khatar ay jirto.
Sunta Nukliyeerka Japan oo soo gaartay Sweden
Sunta ka dhalatay dhulgariirkii iyo qaraxyadii ka dhacay warshadaha nukliyeerka ee dalka Japan ayaa soo gaartay Sweden ayadoo magaalooyinka Stockholm, Kiruna iyo Umeå laga cabiray suntaas. Balse waxaa muhiim in la ogaado in cabirka suntaan aysan waxba u dhimi karin dadka iyo cimilada maadaama ay aad u yartahay.
“Sidaan filaynay, waxaan cabirnay sunta ka dhalatay qaraxyadii warshadaha nukliyeerka Japan. Balse cabirka waa mid yar oo aan wax khatar ah ku ahayn dadka” ayuu yiri Leif Moberg oo ka tirsan Laanta Amniga Sunta Nukliyeerka (Strålsäkerhetsmyndigheten).
Cabirka sunta ugu badan ayaa laga dareemay Stockholm ayadoo cabirka uu gaarayo 0.3 ayadoo Laanta Amniga Nukliyeerka ay sheegtay in aysan wax saameyn ah ku yeelan karin nolosha.
Laanta Amniga Sunta Nukliyeerka (Strålsäkerhetsmyndigheten) ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto cabirka bulshadana la socodsiin doonto haddii khatar ay jirto.
Denmark: Iskuulkii ardada ku qasbay in ay tijaabiyaan hilibka doofaarka oo arintaas ka noqday
Cusbitaalada Sweden oo la dhaliilay
Soomaalida Borlänge oo aduunka caan ka noqday
March 24, 2011 at 18:52
Laakiin warbixintu ma cadeyn miyaa halka sunta radioaktivtu ey ka soo gaartey Sweden bro.
Laakiin warbixintu ma cadeyn miyaa halka sunta radioaktivtu ay ka soo gaartey Sweden bro.
March 24, 2011 at 19:36
Warbixinta laguma sheegin taas balse way iska cadahayay oo cimilada ayaa soo gaarsiisay Sweden. Radiationka waxaa uu ku safraa dabeysha iyo biyaha.
March 25, 2011 at 11:40
waaba khatar hadii suntu sidaa u soo dheeraysay oo ilaa sweden inoogu timi soomaaliya malaha 0,9 bay gaaraysaa.